ပရိုတင်းဘားတွေရဲ့ နောက်ကွယ်... - For her Myanmar
သူများဘားတိုင်း လိုက်မဘားဘဲ အကျိုးဆက်တွေကို အရင်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်နော်…
ပရိုတင်းဘားဆိုတာ Gym ဆော့ပြီး အလေးတင်၊ အလေးတွေမနေတဲ့ အချစ်လေးတွေနဲ့တော့ သိပ်ပြီးစိမ်းမယ့်စကားလုံးမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ပရိုတင်းဆိုတဲ့အတိုင်း ကြွက်သားထုတင်တဲ့နေရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တာမို့ ပရိုတင်းရှိတ်တို့လို ဖြည့်စွက်စာ (Supplement) မသောက်ချင်တဲ့ ယောင်းလေးတွေ ထုတင်တဲ့အချိန်မှာ ဒီပရိုတင်းဘားကို အားပြုပြီးစားကြပါတယ်။ ပရိုတင်းဘားကလည်း စပျစ်သီးခြောက်၊ Oatmeal နဲ့ တခြားနှံစားပြောင်းစတာတွေနဲ့ လုပ်ထားတာဆိုတော့ တကယ့် supplement စစ်စစ်လို့ ထင်ကောင်းထင်သွားနိုင်ပေမဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးဒွန်တွဲနေတတ်တဲ့ သဘာဝအတိုင်း သူ့မှာလည်း Pros & Cons လေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်နော်။
ဒါဆို ကောင်းကျိုးလေးတွေကို အရင်ပြောကြည့်မယ်နော်…
ဒါကတော့ အထွေအထူးပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ နာမည်မှာကတည်းက ပရိုတင်းဘားဆိုတော့ ပရိုတင်းဓာတ်ကိုအခြေခံထားတဲ့ အစားအစာဆိုတာ သိသာနေတော့လေ။ အထူးသဖြင့် ထုတင်ချင်ပေမဲ့ အသားသိပ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ယောင်းလေးတွေအတွက် ဒီပရိုတင်းဘားကို တစ်နေ့ ၁၀ ဂရမ်လောက်စားခြင်းက ယောင်းတို့ရဲ့ကြွက်သားတွေကို အရမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ဒီပရိုတင်းဘားကို စားပြီးတာနဲ့ မာဆယ်တက်စေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ အလေးမခြင်းတွေကို လုပ်ပေးတာက မာဆယ်တက်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းထဲကတစ်ခုပဲမို့ စားပေးသင့်ပါတယ်နော်။
Related Article >>> ဘာလို့အဆီက မကျနိုင်သေးတာလဲ?
တစ်နေ့တစ်နေ့ ကယ်လိုရီအဝင်အထွက်ကို ထိုင်တွက်ပြီး ဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းချက်ရမလဲ ဘယ်လိုပုံစံချက်ရမလဲ စဉ်းစား၊ ပြီးရင် ဈေးဝယ်ဦးဟဲ့ ခုတ်ထစ်ပြီးချက်ပြုတ်ဦးဟဲ့နဲ့ အင်မတန်အလုပ်ရှုပ်တော့ တော်တော်များများက ဖြစ်သလိုစားဖြစ်သွားတာ များပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်သလိုတွေ စားချလိုက်တဲ့အခါမှာ ဝိတ်ကမကျနိုင်ဖြစ်၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဂျာအေးကို သူ့အမေရိုက်နေပါရောလား!!! (ဗိုက်ကလည်းဆာတာကိုး) ဒါပေမဲ့ ဒီပရိုတင်းဘားလေးတွေကတော့ တခြားဘာဘာညာညာ ချက်ပြုတ်နေစရာမလိုဘဲ Calories Intake ကို ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ သင့်တော်တာကို ရွေးချယ်လို့ရပြီး Gym အပါအဝင် တခြားဘယ်နေရာမှာမဆို ဝယ်ယူလို့ရတာမို့ စားဖို့သောက်ဖို့အတွက်ကို သီးသန့် စိတ်ပူနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ မျှတစွာ ပါဝင်တယ်။
ပရိုတင်းဘားဆိုလို့ အသားဓာတ်ကြီးပဲ ပါနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အမျှင်ဓာတ်၊ အာဟာရဓာတ်၊ ကစီဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်နေတာမို့ အာဟာရဓာတ်မမျှတမှာကိုတော့ တွေးပြီး စိတ်ပူနေစရာမလိုပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကြွက်သားအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် Ammino Acid လည်း ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတာမို့ တခြားဖြည့်စွက်စာတွေကို တကူးတကဝယ်သောက်၊ စားနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
သကြားဓာတ်နဲ့ ကယ်လိုရီတွေ များများပါဝင်တယ်။
ရိုးရိုးနှံစားပြောင်း၊ အခွံမာသီးနဲ့ Oatmeal တွေကို ကောက်နယ်ထားတဲ့ မုန့်တစ်ခုကို လူတွေကမက်မက်မောမော အစားထိုးစားကြမယ်လို့ထင်ရင် ယောင်းတို့မှားသွားမှာပေါ့။ စီးပွားရေးသမားတွေကလည်း ဒီအချက်ကို မြင်တတ်တာမို့ ပရိုတင်းလည်းများအောင် စားလို့လည်းကောင်းအောင် သကြားအပါအဝင် ကယ်လိုရီများစေတဲ့ အဆီနည်းနည်းကို ထည့်သွင်းပြီး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် တစ်ခုသတိထားရမှာက ဒီပရိုတင်းဘားကို စားတဲ့အခါ ပရိုတင်းအပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင် သိပ်မလိုအပ်တဲ့ အဆီနဲ့ အချိုဓာတ်က တစ်ဆင့် ဖြစ်လာမယ့် အဆီတွေလည်း ပါဝင်လာမှာမို့ မာဆယ်ချည်းသက်သက်လိုချင်တဲ့ အချစ်လေးတွေအတွက်ကတော့ မသင့်တော်ပါဘူးနော်။ ဒါ့အပြင် ဝိတ်ချနေလို့ ပရိုတင်းဘားပဲ စားတယ်လို့ ပြောရင်လည်း ဟက်ဟက်ပက်ပက် အရယ်ခံရပါလိမ့်မယ်လို့။
ပရိုတင်းဘားထဲမှာ စားကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီး သကြား၊ အဆီတွေအပြင်ကိုမှ တခြားလူလုပ်အမည်မသိပါဝင်ပစ္စည်းတွေ၊ ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်နေတာမို့ ဘာအစားမှ မစားတော့ဘဲ ဒါတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ မက်မက်မောမောစားချင်စိတ်တွေလည်း ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေရှည်စားဖို့ မစဉ်းစားထားရင် ဒီနေ့တစ်ရက်တည်းပါပဲ၊ ဒီရက်ပိုင်းလေးပါပဲဆိုပြီး အစသွားမလုပ်ပါနဲ့။ ရေရှည်မှာ ပြဿနာ များတတ်ပါတယ်လို့။
နှင်းက ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ ပရိုတင်းဘားကို ကောင်းတယ်စားပါလို့ မတိုက်တွန်းထားသလို မကောင်းဘူး၊ လုံးဝမစားနဲ့ ရှောင်လို့လည်း မပြောထားပါဘူးနော်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး စားသင့်မစားသင့်ကို ကိုယ့်ဘာသာပဲ သုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါလို့။ စားလို့ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို သိရုံအတွက် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးလိုက်တာပါ။ ဒါကို ဖတ်ပြီးသွားရင်တော့ စားရမလား၊ မစားရဘူးလားဆိုတာကို စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီထင်ပါရဲ့ ယောင်းတို့ရေ…
References: generationiron, stephencabral
သူမြားဘားတိုငျး လိုကျမဘားဘဲ အကြိုးဆကျတှကေို အရငျကွညျ့ကွစခေငျြပါတယျနျော…
ပရိုတငျးဘားဆိုတာ Gym ဆော့ပွီး အလေးတငျ၊ အလေးတှမေနတေဲ့ အခဈြလေးတှနေဲ့တော့ သိပျပွီးစိမျးမယျ့စကားလုံးမဟုတျပါဘူးနျော။ ပရိုတငျးဆိုတဲ့အတိုငျး ကွှကျသားထုတငျတဲ့နရောမှာ အရေးအကွီးဆုံးဖွဈတာမို့ ဖွညျ့စှကျစာ (Supplement) (ဥပမာ ပရိုတငျးရှိတျ) မသောကျခငျြတဲ့ ယောငျးလေးတှေ ထုတငျတဲ့အခြိနျမှာ ဒီပရိုတငျးဘားကို အားပွုပွီးစားကွပါတယျ။ ပရိုတငျးဘားကလညျး စပဈြသီးခွောကျ၊ Oatmeal နဲ့ တခွားနှံစားပွောငျးစတာတှနေဲ့ လုပျထားတာဆိုတော့ တကယျ့ supplement စဈစဈလို့ ထငျကောငျးထငျသှားနိုငျပမေဲ့ ကောငျးကြိုး၊ ဆိုးကြိုးဒှနျတှဲနတေတျတဲ့ သဘာဝအတိုငျး သူ့မှာလညျး Pros & Cons လေးတှေ ရှိနတေတျပါတယျနျော။
ဒါကတော့ အထှအေထူးပွောနစေရာမလိုတော့ပါဘူးနျော။ နာမညျမှာကတညျးက ပရိုတငျးဘားဆိုတော့ ပရိုတငျးဓာတျကိုအခွခေံထားတဲ့ အစားအစာဆိုတာ သိသာနတေော့လေ။ အထူးသဖွငျ့ ထုတငျခငျြပမေဲ့ အသားသိပျမကွိုကျဘူးဆိုတဲ့ ယောငျးလေးတှအေတှကျ ဒီပရိုတငျးဘားကို တဈနေ့ ၁၀ ဂရမျလောကျစားခွငျးက ယောငျးတို့ရဲ့ကွှကျသားတှကေို အရမျးအထောကျအကူဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။ နောကျပွီး ဒီပရိုတငျးဘားကို စားပွီးတာနဲ့ မာဆယျတကျစမေယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ၊ အလေးမခွငျးတှကေို လုပျပေးတာက မာဆယျတကျဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးထဲကတဈခုပဲမို့ စားပေးသငျ့ပါတယျနျော။
Related Article >>> ဘာလို့အဆီက မကနြိုငျသေးတာလဲ?
တဈနတေ့ဈနေ့ ကယျလိုရီအဝငျအထှကျကို ထိုငျတှကျပွီး ဘယျဟာနဲ့ဘယျလိုပေါငျးခကျြရမလဲ ဘယျလိုပုံစံခကျြရမလဲ စဉျးစား၊ ပွီးရငျ ဈေးဝယျဦးဟဲ့ ခုတျထဈပွီးခကျြပွုတျဦးဟဲ့နဲ့ အငျမတနျအလုပျရှုပျတော့ တျောတျောမြားမြားက ဖွဈသလိုစားဖွဈသှားတာ မြားပါတယျ။ ဒီလို ဖွဈသလိုတှေ စားခလြိုကျတဲ့အခါမှာ ဝိတျကမကနြိုငျဖွဈ၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဂြာအေးကို သူ့အမရေိုကျနပေါရောလား!!! (ဗိုကျကလညျးဆာတာကိုး) ဒါပမေဲ့ ဒီပရိုတငျးဘားလေးတှကေတော့ တခွားဘာဘာညာညာ ခကျြပွုတျနစေရာမလိုဘဲ Calories Intake ကို ကွညျ့လိုကျရုံနဲ့ သငျ့တျောတာကို ရှေးခယျြလို့ရပွီး Gym အပါအဝငျ တခွားဘယျနရောမှာမဆို ဝယျယူလို့ရတာမို့ စားဖို့သောကျဖို့အတှကျကို သီးသနျ့ စိတျပူနစေရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ အာဟာရဓာတျတှေ မြှတစှာ ပါဝငျတယျ။
ပရိုတငျးဘားဆိုလို့ အသားဓာတျကွီးပဲ ပါနတောမြိုးမဟုတျဘဲ အမြှငျဓာတျ၊ အာဟာရဓာတျ၊ ကစီဓာတျတှလေညျး ပါဝငျနတောမို့ အာဟာရဓာတျမမြှတမှာကိုတော့ တှေးပွီး စိတျပူနစေရာမလိုပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ ကွှကျသားအတှကျ အထောကျအကူဖွဈစမေယျ့ Ammino Acid လညျး ပေါငျးစပျပါဝငျနတောမို့ တခွားဖွညျ့စှကျစာတှကေို တကူးတကဝယျသောကျ၊ စားနစေရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
သကွားဓာတျနဲ့ ကယျလိုရီတှေ မြားမြားပါဝငျတယျ။
ရိုးရိုးနှံစားပွောငျး၊ အခှံမာသီးနဲ့ Oatmeal တှကေို ကောကျနယျထားတဲ့ မုနျ့တဈခုကို လူတှကေမကျမကျမောမော အစားထိုးစားကွမယျလို့ထငျရငျ ယောငျးတို့မှားသှားမှာပေါ့။ စီးပှားရေးသမားတှကေလညျး ဒီအခကျြကို မွငျတတျတာမို့ ပရိုတငျးလညျးမြားအောငျ စားလို့လညျးကောငျးအောငျ သကွားအပါအဝငျ ကယျလိုရီမြားစတေဲ့ အဆီနညျးနညျးကို ထညျ့သှငျးပွီး ထုတျလုပျထားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ တဈခုသတိထားရမှာက ဒီပရိုတငျးဘားကို စားတဲ့အခါ ပရိုတငျးအပါအဝငျ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ အာဟာရဓာတျတှကေို ရမှာဖွဈတဲ့အပွငျ သိပျမလိုအပျတဲ့ အဆီနဲ့ အခြိုဓာတျက တဈဆငျ့ ဖွဈလာမယျ့ အဆီတှလေညျး ပါဝငျလာမှာမို့ မာဆယျခညျြးသကျသကျလိုခငျြတဲ့ အခဈြလေးတှအေတှကျကတော့ မသငျ့တျောပါဘူးနျော။ ဒါ့အပွငျ ဝိတျခနြလေို့ ပရိုတငျးဘားပဲ စားတယျလို့ ပွောရငျလညျး ဟကျဟကျပကျပကျ အရယျခံရပါလိမျ့မယျလို့။
ပရိုတငျးဘားထဲမှာ စားကောငျးအောငျလို့ဆိုပွီး သကွား၊ အဆီတှအေပွငျကိုမှ တခွားလူလုပျအမညျမသိပါဝငျပစ်စညျးတှေ၊ ဓာတျတှအေမြားကွီးပါဝငျနတောမို့ ဘာအစားမှ မစားတော့ဘဲ ဒါတဈမြိုးတညျးကိုပဲ မကျမကျမောမောစားခငျြစိတျတှလေညျး ဖွဈသှားတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရရှေညျစားဖို့ မစဉျးစားထားရငျ ဒီနတေ့ဈရကျတညျးပါပဲ၊ ဒီရကျပိုငျးလေးပါပဲဆိုပွီး အစသှားမလုပျပါနဲ့။ ရရှေညျမှာ ပွဿနာ မြားတတျပါတယျလို့။
နှငျးက ဒီဆောငျးပါးထဲမှာ ပရိုတငျးဘားကို ကောငျးတယျစားပါလို့ မတိုကျတှနျးထားသလို မကောငျးဘူး၊ လုံးဝမစားနဲ့ ရှောငျလို့လညျး မပွောထားပါဘူးနျော။ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ အနအေထားပျေါမူတညျပွီး စားသငျ့မစားသငျ့ကို ကိုယျ့ဘာသာပဲ သုံးသပျပွီးဆုံးဖွတျပါလို့။ စားလို့ဖွဈလာမယျ့ အကြိုးဆကျတှကေို သိရုံအတှကျ ဒီဆောငျးပါးကို ရေးလိုကျတာပါ။ ဒါကို ဖတျပွီးသှားရငျတော့ စားရမလား၊ မစားရဘူးလားဆိုတာကို စိတျရှငျးရှငျးနဲ့ ဆုံးဖွတျနိုငျပွီထငျပါရဲ့ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: bars, Body, Cons, fit, Pros, protein, tips
Hnin Ei Oo May 22, 2019